Tobaneeyo ku dhintay gaadiid daad qaaday; waddada halbowlaha ah ee isku xirta gobollada Puntland oo xiran kadib buundo jabtay. – Radio Daljir
Tobaneeyo ku dhintay gaadiid daad qaaday; waddada halbowlaha ah ee isku xirta gobollada Puntland oo xiran kadib buundo jabtay.
Sheerbi, May 21- Inta la hubo 10 qof ayaa ku dhintay hanti badanna waa ku burburtay daadad xooggan oo ka soo butaacay roobab mahigaan ah oo habeennadii ugu danbeeyey ka da’ayey dhulka buuralayda ah ee u dhaxeeya gobollada Bari iyo Karkaar iyo waliba agagaarka degmada Qandala.
Hay?adda Puntland u qaabisan waddooyinka ee NESHA ayaa iyaduna sheegtay in ay si ku meel-gaar ah u xiran tahay waddadii halbowlaha ahayd ee isku xiri jirtay gobollada Puntland.
Dhimashada dadkaan iyo burburka-hantiyeed ayaa yimid kaddib markii mawjado biyo ahi ay xambaareen gaadiid xamuul ah iyo kuwa rakaab siday barqanimadii maanta. Wararka ayaa intaa ku daraya in biyahaasi ay qallibeen baabuurta horayna u sii qaatay qaar ka mid ah dadkii saarnaa, waxaana inta badan khasaare roobeedku uu ka dhashay deeganno ka tirsan gobolka Karkaar.
Baabuur nooca loo yaqaan waaraadka oo ah mid xammuul ayaa xalay xilli dambe ku qallibmay meel ku dhow degmada Qandala, halkaas oo ay ku dhinteen illaa shan qof halka todoba kalena ay ku dhaawacmeen.
Dhinaca kale, wararka aannu ka helayno tuulada Sheerbi ee gobolka Karkaar ayaa sheegaya in ay jabtay buuntadii tuuladaasi ee oo uu ka tallaabi-jiray laamiga isku-xira inta badan gobollada Puntland.
Jabitaanka buundada Sheerbi ayaa timid kaddib markii togga hoos mara buundada ee Booxaaro uu maanta soo rogay mawjado biyo ah oo aad u xoog badan kuwaasi oo dul-maray buundada, sababay in ay dunto qayb-ahaan dhismiheedii.
Dhammaan gaadiidkii is-ticmaali jiray waddadaasi, una kala gooshi-jiray gobollada iyo degmooyinka Puntland ayaa is-taagay, kuna kala go’doonsan labada dhinac ee buundada, waxaana hoganaya illaa galabta gaadiid aad u badan oo safar ahaa.
Hay’adda waddaanyinka Puntland NESHA, saraakiil heer gobol ah iyo injineerro xagga dhismaha iyo waddooyinka ah ayaa gaaray goobta ay ku taallo buundada duntay ee Sheerbi, waxaana socda dadaallo dib loogu hagaajinayo buundada inkastoo taallooyinka wax-qabad ay bilaaban doonaan xilliga biyuhu joogsadaan.
Ma cadda xilliga rasmiga ah ee lagu guulaysan-karo dib u dayac-tiridda Buundadaasi Sheerbi ee maanta jabtay, waxaana jira walwal iyo walaac xooggan oo la muujinayo kuna aaddan, xanibnaanta iyo kala xirnaanta dadka iyo gaadiidka.
Waddada laamiga ah ee isku-xirta gobollada Puntland ayaa ah halbawle nafeed laf-dhabar u ah ganacsiga iyo isku-xirnaanta gobollada kala duwan ee Puntland iyo gobollada kale xiriirka ganacsi la wadaaga Puntland.
Daad qaaday gaadiid marayey wadada isku xirta Bossaso & Qardho, sababayna khasaare naf & maal leh.
Carmo, May 21 – Ugu yaraan afar baabuur ayaa illaa iyo xalay ku gaddoontay waddada laamiga ah ee isku xirta inta badan gobollada Puntland gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Bossaso iyo Qardho, sababayna kahsaare naf iyo maalba leh.
Baabuurta rogmatay ayaa labo ka mid ahi waxay ahaayeen kuwa xamuulka qaada ee loo yaqaanno Canna-maydlaha, halka labada kalena ay ahaayeen Basaska yaryar ee rakaabka, waxaana ay qallimeen kaddib markii ay mijo-xaabiyeen daadad ka soo rogmay roobab xooggan oo xalay illaa shalay ka da’ayey deegaanno badan oo ku yaalla gobollada Bari iyo Karkaar ee Puntland.
Qaar ka mid ah dadkii gaadiidkaasi saarnaa ayaa illaa iyo haatan la la’yahay meel ay jaan iyo cirrib-dhigeen, mana jirto cid si rasmi ah u caddayn-karta noloshooda iyo dhimashadooda toona, waxaana shilalka badankoodu ay ka dhaceen deeggaanno hoos yimaada degmada Carmo ee gobolka Bari.
Dhinaca kale ciidamada amnigu Puntland gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa saaka xiray labo darawal oo waday qaar ka mid ah baabuurta biyuhu la tageen, kuwaasi oo loo haysto mas’uuliyad xumo iyo in ay naftooda iyo middii dadkii ay sideenba ay ku biimeeyeen biyo xooggan oo si hawli ah u soconayey.
Toddobaadkii ugu danbeeyey waxaa aad u yaraa isku-socodka dadka iyo gaadiidka inta u dhaxaysa magaalooyinka Bossaso iyo Qardho oo ka kala tirsan gobollada Bari iyo Karkaar ee Puntland, taas oo ay kallifeen mawjado biya ah oo ka soo rogmaday roobab mahigaan ah oo habeennadii ugu danbeeyey ka hoorayey dhulka u dhaxeeyey labadaasi gobol.